How'd it happen and more reports?: မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ခြင်း
အိမ်နီးချင်းဒေသတွင်းနဲ့ မြန်မာ စီးပွားရေးချိန်ခွင်လျှာ ညှိနေခြင်း
ရန်ကုန် ၊ ဇွန် ၁၉ - သည် တစ်ပတ် အတွင်း နိုင်ငံ တကာ မီဒီယာ တွေမှာ မြန်မာနဲ့ ပတ်သက် လို့ အာဆီယံ ဒေသတွင်းနဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တွေ၊ စီးပွားချိတ်ဆက် မှု၊အပြန် အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မှု၊ အားသာ ချက် အားနည်းချက် စ တာ တွေ သုံးသပ် ရေးသားထားတဲ့ သတင်း ဆောင်းပါး အချို့ကို တွေ့ရပါ တယ်။
မြန်မာကို စင်ကာပူက တစ် ဆင့် ချိတ်ဆက် ရယူနိုင် တယ် လို့ အဓိပ္ဗာယ် ရတဲ့ဆောင်းပါး ကို ဝေါလ်စထရိဂျာနယ် မှာ တွေ့ရ တယ်။ ပါကစ္စတန် အော့ဘ်ဆာ ဗာ အွန်လိုင်းမှာ ယူနန် ပြည်နယ် ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးလက်ဦးမှု ကနဦး ခြေ လှမ်း ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက် ပါရှိ တယ်။ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ မြန် မာ ကို ဝင်ရောက်ဖို့ နှေးကွေးလွန်း နေခြင်းလို့ ခေါင်းစU်ပါရှိတဲ့ သ တင်း တစ်ပုဒ် သည်နေးရှင်းသ တင်းစာ မှာ ဖော်ပြတယ်။ သည် နေးရှင်းသတင်းစာမှာပဲ အာဆီယံ စီးပွားရေး ဝန်ကြီး တွေ အမေ ရိ ကန် လုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ စေ့စပ် ညှိ နှိုင်း ကြောင်း သတင်းပါရှိ တယ်။ မြန်မာ ရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု စိန် ခေါ်ချက်ဆိုတဲ့ အမြင်သုံးသပ် ချက် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ဘစ်ဇ နက်ဒေးလိုက်ဗ်အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ ရတယ်။
ဂျင်မ်ရော့ဂျာနဲ့ ဂျော့ ဆိုး ရော့စ် တို့ လို အဆင့်မြင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ သူတွေ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် အလွန်အမင်းစိတ် ဝင်စားမှု ကို ပြ သနေ တာဟာ စွန့်စား ရမယ့် အချိန်တစ်ခု နဲ့ အတွေ့အကြုံ ရရှိ စေဖို့ ဖြစ်နိုင် ပါတယ် လို့ ဆောင်း ပါး ရှင် ဂျွန် ဖိလစ် က ဝေါလ်စထရိဂျာ နယ် သတင်းမှာ စဖွင့်ထားတယ်။ သ ယံ ဇာတ အရင်းအမြစ် တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာ တစ်လွှား မှာ ကုန်သွယ် မှု နဲ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု တွေ တိုးတက် လာ နေတာ တွေ့ရ တယ် လို့ ကမ္ဘာဘဏ် ရဲ့ ဇန် နဝါရီ လ အစီရင်ခံ စာက ဆို တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်မျိုးသား လုံး ထုတ်ကုန် - ဂျီဒီ ပီ တိုးတက် မှု ဟာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် မှာ ၆. ၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်လာ တယ် လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အစီရင်ခံစာကို ကိုး ကား ဖော်ပြတယ်။ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာ နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဂျီဒီ ပီ တိုးတက်နှုန်း ဟာ ၅ . ၅ ရာခိုင် နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သည်ဆောင်းပါး မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ကုန်သွယ် လုပ်ကိုင်တဲ့ စင် ကာပူ စာရင်းဝင်ရိုးမ ကုမ္ဗဏီ အကြော င်းပါရှိ တယ်။ မြန်မာ့အိမ် ခြံမြေ ဈေးကွက် ၊ဘဏ် လုပ်ငန်း ၊ လူနေအိမ်ရာ၊ ဟိုတယ်၊ရုံးခန်း စ တဲ့ကဏ္ဍတွေ မှာ ရိုးမ ကုမ္ဗဏီ လုပ် ကိုင်နေ တယ်။ စင်ကာပူ စာ ရင်းဝင် အင်တာရာ ရီဆို့ စ်ဆက် က မြန် မာနိုင်ငံ ကုန်းတွင်း ရေ နံ ထုတ် လုပ် ရေးမှာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ဈေးကွက် ဝေစု ရရှိထားတယ် လို့ဆို တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်တွေကို စိတ်ထက်သန်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လို တဲ့ ပြည်ပ ကုမ္ဗဏီ တွေ ရှိ နေ တယ်။
လက်ရှိမှာ ပြည်ပ ကုမ္ဗဏီ ၅၀ ကျော် က အလားအလာရှိတဲ့ ရေ နံ နဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် ၃၀ အတွက် တင်ဒါ ရယူ ကြမှာဖြစ် တယ်။
စင်ကာပူ အခြေစိုက် ဆောက် လုပ်ရေး ကုမ္ဗဏီ ယုံနမ် ဟိုးလ်ဒင်း က လည်း မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လေဆိပ်နှစ်ခုအတွက် တင်ဒါ တင်သွင်း တယ်။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ် တိုးချဲ့ ရေး နဲ့ ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေ ဆိပ် စီမံကိန်း တို့အတွက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍမှာ တင်ဒါ ဝင်ရောက် ထား တဲ့ ကုမ္ဗဏီ အချို့ ကို လည်း ဖော်ပြထား တာ တွေ့ရ တယ်။
ယူနန် ပြည်နယ် ရဲ့ ကုန်သွယ် ရေး လက်ဦးမှုကနဦး ခြေ လှမ်း ဆို တဲ့ ပါကစ္စတန် အော့ဘ် ဆာ ဗာ အွန် လိုင်း က သတင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ စီးပွားရေး အ ရေး ပါ မှုဟာ ပထဝီအနေအထား အ ရ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေ တဲ့ အ ရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေ နဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင် ပိုင်း ကနေ ဗီယက်နမ် အထိ ချိတ်ဆက် မယ့် ရထား လမ်း၊မြန်မာကနေ လာ အို အထိ ဆက်သွယ်မယ့် ကား လမ်းတွေဟာ ယူနန် ပြည်နယ်အ တွက် အရေးပါ တဲ့ ကုန်သယ်မှု စင် တာ ဖြစ်စေ တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာ-ဘင်္ဂ လား ဒေ့ရှ် ကို ချိတ်ဆက် မယ့် ရ ထားလမ်းစီမံကိန်းကို အဆိုပြု ထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ရထားလမ်း ကား လမ်း တွေ ချိတ်ဆက် မှုဟာ ဥပမာအားဖြင့် စီးပွားရေး စင်္ကြံလမ်းတွေ လို အသုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
သည်နေးရှင်း သတင်းစာ မှာ ထိုင်း စီးပွားရေး သမားတွေ မြန်မာ ကို ဝင်ရောက်ဖို့နှေးကွေး လွန်းနေ တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဆောင်းပါး မှာ တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ကော်မရှင် ဟာ သည်နှစ် ပထမ လေးလ အတွင်း ကုမ္ဗဏီ ၃၃ခု ကို လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း ၊အစချီ ရေး သား တယ်။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ မှု ပမာဏ ဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၁၅ သန်းရှိပြီလို့ဆိုတယ်။ အဲသည် အ ထဲ ကအချို့ ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဖြစ် တယ်။ သို့ပေမဲ့ အရင်ဦးဆုံး ရောက် ရှိ နှင့်ပြီး ဖြစ်တဲ့ ထိုင်း လုပ်ငန်းရှင် တွေ ကတော့ သူတို့ ထိုင်းတွေ မြန် မာ နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ဖို့ သိပ် ကို နှေးကွေး လွန်းနေ တယ် လို့ ဆိုပါ တယ်။
မြန်မာမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထိုင်း လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက မြန်မာ မှာ ထိုင်း ကုမ္ဗဏီတွေ တခြား နိုင်ငံ က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတွေ ထက် နောက် ကျမှာ စိုးရိမ် ကြောင်းပြောတယ်။ ပြဿနာ တစ်ခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ မြေ ယာ ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံ စီးပွားရး ဝန်ကြီး တွေ အမေရိကန်မှာ စီးပွားရေး လုပ် ငန်းတွေ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း တဲ့သတင်း မှာတော့ အာဆီယံ အမေ ရိကန် အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေ ရှာဖွေ ဖို့ နဲ့ မိတ်ဖက် အခွင့်အလမ်း တွေ ပါ ဝင် တယ်။ အာဆီယံ နဲ့အမေ ရိ ကန် ကုန်သွယ်မှု ၊အလုပ်အကိုင် ဖော် ဆောင်မှုတွေ လည်း တွေ့ရ တယ်။ အာဆီယံ ဟာ အမေရိကန် ရဲ့ ငါးခု မြောက် အကြီးဆုံးကုန်သွယ် ဖက် ဖြစ်အောင် တိုးမြှင့် မှာဖြစ်ပြီး လေး ခုမြောက် အကြီးဆုံး ပို့ကုန် ဈေး ကွက် ဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းမယ် လို့ ဆိုပါ တယ်။
ဘစ် ဇနက်ဒေး လိုက်ဗ် အွန် လိုင်း မှာ မြန်မာ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်း မှု စိန်ခေါ်ချက် သုံးသပ်ချက်မှာ နိုင် ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ မြန် မာကို စိတ်ဝင်စား လာပုံ တွေ နဲ့စ တင် ရေးသားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသေ ချာမှု တွေ၊ စွန့်စား ရမှာ တွေ ကို လည်း ဖော်ပြထား ပါတယ်။ နိုင်ငံ ရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အခြေအ နေ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ တွေနဲ့ ငြိမ်း ချမ်းရေးအပေါ် အစိုးရ ရဲ့ ပြုပြင် ထိန်း သိမ်းမှု စတာတွေ ကို ထောက် ပြ ထား တယ်။ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် တွေအပြင် အ ခက်ခဲဆုံး က ကျိုးကြောင်း ဆီ လျော်ခိုင်လုံ တဲ့ စိတ်ချ ရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင် ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဂျီဒီပီ၊ ကုန် ထုတ် စွမ်းအား ကျဆင်း မှု၊ လုပ် သား လုပ်အားခ စတဲ့အခက်အခဲ၊ စိန်ခေါ် ချက်တွေကို မက်စ် ကင်းစီး ဂလိုဘယ် အင်စ တီ ကျူ့ ရဲ့အစီရင် ခံစာ ကို ကိုးကား ဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရ တယ်။
ခရီးဆက်ဦးမည့် အာရှ အရှိန်အဟုန်
Myanmar: Financial Position in the Fund
Summary of IMF members’ quota, reserve position, SDR holdings, outstanding credit, recent lending arrangements, projected payments due to the IMF, and monthly historical transactions with the Fund.
I. Membership Status: Joined: January 03, 1952; Article XIV
Quota 258.40 100.00
Fund holdings of currency (Exchange Rate) 258.40 100.00
Net cumulative allocation 245.76 100.00
Holdings 1.93 0.79
V. Latest Financial Arrangements: None
VI. Projected Payments to Fund 1/
0.04 0.17 0.17 0.17 0.17
Myanmar: Transactions with the Fund
from May 01, 1984 to August 31, 2014
Poverty Reduction and Growth Trust 1/2/
Purchases and Loans
19910000 226,547 9540226,547 954
19900000 1,824,000 10,32001,824,000 10,320
19890000 5,940,000 37,46805,940,000 37,468
1988010,931,250 404,907010,001,692 35,159020,932,942 440,066
1987027,375,000 1,999,640011,681,692 111,597039,056,692 2,111,237
1986026,693,750 3,868,259011,681,692 169,979038,375,442 4,038,238
1985013,500,000 5,192,00709,857,692 226,084023,357,692 5,418,091
198404,187,500 4,216,24603,254,846 266,19407,442,346 4,482,440
1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.
Asia and Pacific Reginal Economic Outlook
World Economic Outlook April 2014
MGI Myanmar Full Report BUR
Posted by Ko Nge at Wednesday, September 24, 2014